Graphene runako uye hutano zvigadzirwa
Wireless kuchaja dhesiki karenda
Wireless kuchaja mbeva pad
Wireless Kuchaja Notebook Series
Wireless kuchaja stand
Wireless kuchaja chekuchengetedza chigadzirwa series
Wireless kuchaja chikwama
Nhanganyaya yeA Safe Voltage Electric Heating Blanket
Mamiriro ekunze anotonhora echando ari kuuya munguva pfupi, wagadzirira kutarisana nawo here? Unogona kutaura kuti ndakagadzira bhachi rekudziisa, masokisi ekudziya, mashefu ekudziya, mask yekudziya, nezvimwe. Zvese izvi zvinogona chete kukuchengeta uchidziya kana wakamuka. Ndoita sei kana warara? Iyo yemagetsi ...
Graphene Kupisa Ziso Mask Kurara Ziso Mask
Nekukurumidza kwenguva itsva, kurara zvakanaka hakusviki kwatiri. Denderedzwa rakasviba pasi pemaziso uye zviso zvakasuruvara zvakatiyeuchidza kuti taishuva sei kukura kune utano. Zvave kunetsa kurara zvakanaka manje. Kune nguva dzose zvinhu zvine minzwa zvinotiita kuti tirare zvakanaka, ...
Tri-peta isina waya yekuchaja mbeva pad
Kambani yedu ndeyeOem Factory Electronic, kunyanya mumunda wekuvandudza zvipo. Isu tiri chipo Chitubu Vagadziri Vagadziri Isu tinopa Chitsva Chigadzirwa Kuvandudza zvipo zvekuvandudza masevhisi Iyi mbeva padhi ndeyeKugadzira Chipo chakagadzirwa uye chakagadziridzwa neR&D timu yedu. Zviri ...
Chigadzirwa chitsva che patented multifunctional table mat chiri pamusika
Kune vanhu vanopedza yakawanda yenguva yavo pamberi pekombuta, bhenji rakanaka rekushanda rinogona kukuchengeta uri muchimiro chakanaka zuva rese. Iyo Iphone Accessories Desk Pad chinhu chakakosha kune yakanaka workbench. Iphone 12 Wireless Charger desk mat inogona kudzivirira desktop f...
2022 New Desk Calendar Sechipo cheKisimusi
Kisimusi yaswedera, uchiri kunetseka nekusaziva kuti Kisimusi Chipo chekupa chii? Ndine Mazano echipo cheKisimusi.Wadii kutarisa iyi 2022 Inovandudza Chigadzirwa Chekusimudzira Chipo 4 mune 1 isina waya yekuchaja dhesiki kalendari, iyo ine isina waya yekuchaja, W...
Kambani yedu ichangobva kuwedzera yakakwirira frequency fuse michina
na admin pa 21-08-06
Kambani yedu ichangobva kuwedzera yakakwira-frequency fuse michina Nekuda kwekuodha zvinodiwa, kambani yedu ichangobva kuwedzera yakakwira-frequency fuse mudziyo. Zvigadzirwa zvematehwe zvinogona kuburitswa nemudziyo uyu zvinosanganisira: zvikwama, mabhegi epasipoti, mabhandi, zvipo zvematehwe, masutu ematehwe uye zvimwe zvinhu zvidiki zvematehwe, mabhegi...
sheerfond anotora chikamu mune 2021 chipo fair
na admin pa 21-04-30
Mufananidzo 1. Mufananidzo 1 Tichitarisa pasi nezvechipo chegore ra2021 Semugadziri uye fekitori yeOEM yezvipo nezvigadzirwa, takatora chikamu mukuratidzira kwezvipo kwakaitwa kubva musi wa25 kusvika 28, 2021. Chiratidziro ichi chakatangwa muShenzhen, China. Pashoo yacho, takasangana nevatengi vekare nevatsva. Zvakanyanya ...
Chii chiri kuitika neiyo iPhone12 MagSafe magineti isina waya yekuchaja
na admin pa 21-03-18
Chii chiri kuitika neiyo iPhone12 MagSafe magineti yekuchaja isina waya Kubva iyo iPhone 8 muna 2017, Apple yakawedzera iyo isina waya yekuchaja kune ese ma iPhone modhi, yakafanana nenzira yekuchaja isina waya yemamwe nharembozha, uye inotanga kuchaja kana yaiswa. pawaya...
Nzira yekusarudza sei zvinhu uye hunyanzvi hwebhegi rechipo nenzira kwayo?
Mapepa echipo mabhegi ndiwo anonyanya kufarirwa mabhegi ekurongedza panguva ino. Tichifunga nezvekudhura kwayo uye kushanda kwayo kwakanaka kwekudhinda, inofarirwa nevatengesi vakawanda. Saka ndezvipi zvakakosha zvemabhegi ezvipo zvemapepa? Ndeapi mamwe ehunyanzvi anowanzo kuwanikwa mumabhegi ezvipo nemitengo yakaderera asi aine ...
Muhupenyu hwedu nebasa, tichasangana nemhando dzose dzezvipo. Pakati peshamwari, nhengo dzemhuri uye mabasa ebhizinesi, tichasangana nezvipo zvakawanda. Nhasi tichataura pamusoro pekurongwa kwezvipo. Kuumbwa nezvinhu zvakasvibirira Rongedza ndima iyi Zvigadzirwa zveCrystal, zvigadzirwa zvekristaro glue, mapurasitiki ...
Kero: Dongguan City